Umphakathi ubhikishe washisa amaloli | News24
Umphakathi ubhikishe washisa amaloli
Umphakathi waseNtshawini ushise amaloli amathathu ngenkathi ubhikisha ngoLwesihlanu oledlule.x
UMPHAKATHI waseNtshawini uvimbe umgwaqo u-R102 washisa amaloli amathathu ngenkathi ubhikisha ngoLwesihlanu oledlule ukhala ngokuthi kumele kufakwe izithiyo zokunciphisa isivinini sezimoto emgwaqeni u-R102.
Umphakathi uphakamise lesi sicelo emuva kokuthi kushayisane izimoto kuwona lo mgwaqo ngoLwesihlanu ekuseni, kanti uthi izingozi zalolu hlobo ziyimvamisa kuyona le ndawo.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, u-Major Shooz Magudulela uthe kuvulwe icala lokucekela phansi impahla emaphoyiseni aKwaDukuza kodwa akuka boshwa muntu kanti amaphoyisa ayaqhubeka nokuphenya.
IKhansela laseNtshawini uMnuz Nevas Hlatshwayo uthe umphakathi ububhikisha ngoba izingozi zivamisile ukwenzeka kuleya ndawo kanti sekwalimala nabantu abaningi yingakho umphakathi ukholelwa ukuthi izithiyo zokunciphisa isivinini sezimoto zibalulekile.
UMnuz Hlatshwayo ukugxekile ukushiswa kwamaloli wathi lokhu kuzoba nomthelela ongemuhle kulabo abasebenzela izinkampani zawo lamaloli.
Uqhube wathi ubuholi kumele kuhlangane nomphakathi ukuze kuzoxoxiswana kutholwe izixazululo ngalolu daba. Uthe kumele noMnyango wezokuThutha uthintwe ngoba yiwona ogunyazwe ukuba ufake izithiyo zokunciphisa isivinini sezimoto kulo mgwaqo.